Awanakuyikhetha ithoyizi kwengane - akusiwona lula njengoba kubonakala. Dolls, izimoto, isilwane imifanekiso ... Ububanzi izitolo kwanamuhla kwenza amehlo ugijime bacondze etindzaweni letehlukene. Futhi cishe njalo emashalofini choice enkulu amahhashi anemibala ehlukene nosayizi.
Toy-ihhashi khona cishe njalo ingane. Izingane ezinkulu unyakazisa horse ne abagijimi ongaphambili omise izibambo ekhanda, ezingasetshenziswa lapho zivuleka, edlulisa vestibular ukuqeqeshwa apharathasi kanye nokudidiyela. Lezi amathoyizi ingenziwa ipulasitiki, ukhuni noma kanokusho (noboya Faux). indlela ngayinye kunezinzuzo zako kanye nebubi. Horse noboya uthambile kakhulu futhi kumnandi touch, ngokuvamile bathanda izingane, kodwa ukuqoqa nothuli oluningi, kunzima ukuhlanza. Ezimakethe amathoyizi ezishibhile noboya villi abethela kakhulu uvalwe, ngakho ukugibela tufts, engesiyo kuhle imvuthuluka. amahhashi Plastic isisindo ukukhanya, bangakwazi Sula noma ugeza kalula. Nokho, epulasitiki emibi kalula, zingase zimiswe chips (ikakhulukazi izimo hhayi izinga okusezingeni kakhulu). Ngokhuni ithoyizi ihhashi - ke yilokhu ibizwa ngokuthi zakudala uhlobo. Kuyinto eqinile futhi esethembisayo, kodwa okwedlula ongakhetha kakhulu plastic noboya.
Ngaphezu amahhashi, unyakazisa izihlalo, kukhona ihhashi-kweqa, lapho esikhundleni sohlelo komzila kukhona amasondo. Kid afake off imilenze kusukela phansi futhi ngaleyo ndlela "jumping" ihhashi lakhe. Roll imvuthu abadala. Ngaphezu kwalokho, kukhona uhlobo Transformers, okungase iguqulwe ngesihlalo sabakhubazekile, futhi esihlalweni unyakazisa, ezihambayo abagijimi noma babadedisela.
Lapho ingane ikhula, ithoyizi-ihhashi akaphelelwa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo. A ezihlukahlukene imifanekiso akhiwe ngerabha futhi plastic uvumele beveza eziningi Ekwenza Umlingiswa imidlalo, ungakwazi ukuhamba futhi uvakashele. Kukhona ngisho lonke playsets ipulazi neyamathoyizi umndeni amahhashi. Njengoba ubona esithombeni, ithoyizi-ihhashi yalolu hlobo ezifanelekayo amantombazane futhi abafana.
Ikakhulukazi amantombazane ekhiqizwa eziningi ithoyizi amahhashi nge ezihlukahlukene izesekeli, onodoli amakalishi. Lona ephelele imidlalo Ekwenza Umlingiswa. Futhi amadoda esizayo amasethi ephelele, okuyinto kanye namahhashi kuhlanganisiwe amadoda (amasosha, Knights, nokunye. N.)
Khuluma mayelana ihhashi lokudlala kuyobe akuphelele ngaphandle kukhulunywa ngamahhashi amancane. Akukona nje ithoyizi. Little ihhashi - amaqhawe edumile opopayi "Ubungane - kungcono isimangaliso," okuyinto wathandwa izinhliziyo amantombazane emhlabeni wonke. Iyatholakala iponi yonke ukunambitheka: kusukela izibalo miniature (ukuphakama mayelana 5 cm) a amathoyizi interactive ngokwanele ezinkulu (uplastiki kanokusho).
Zokusebenza kwengqondo kufanele ocatshangelwayo ezithakazelisayo, esekelwe okuthandwa wengane. Ngakho, uma izinyane ozithandayo baba ithoyizi-ihhashi, lokhu kungase kubonise ukuthi uzama ngendima ihhashi, hhayi umshayeli wesithuthuthu, okungukuthi, ngeke kakhulu athembele kwabanye (sifana nehhashi incike aphethe, ngalo feeds) kanye ngokungaphakathi bakwazi refract isimo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amateur ithoyizi amahhashi - it is cishe, le Bani ezibulala ngomsebenzi esizayo, uzimisele ukusebenza uze uphonsa, futhi imali incane kabi. Imfundiso Yiqiniso, kuyinto engathandeki kakhulu, kodwa uma uya ngayo ingqondo yakho, ungakwazi ngezinye izikhathi athi isikhashana ingane ezahlukene, samenza waba nethuba akufanele igcine ngokuba 'ihhashi ", kodwa futhi" umgibeli ", futhi mqinisekise ukuthi zonke (noma okungenani eziningi) e yokuphila ixhomeke ngokunembile phezu kwakhe. Lesi sakamuva kuyoba usizo kunoma yiziphi le nsizwa: umuntukazana ngethoyizi ozithandayo - ihhashi, futhi unguye crazy mayelana amakati, onogwaja, onodoli, amarobhothi, njll ...
Analog "Lego". Ingabe ikhona indawo le nganekwane?
Imoto Umsebenti - stroller for ezintathu!
Izingane Wabesifazane: lapho ukuya kudokotela
Ukungena Double - indlela eyinhloko ezimali
Isayithi ye nokubekwa ukukhangisa kwemgomo
Pilyuska (iklabishi): iresiphi for pickling e Georgian
Stockings umshado - umakoti-accessory ongaqondakali
Indlela esiphatha ngayo ezindlebeni izinja
Indlela yokwenza kompheme ne umjondolo ngezandla - incazelo nesithombe